Popcorn အချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်သမျှ Androidsis
[APK] Popcorn Time သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်စာတန်းထိုး၊ မူရင်းဗားရှင်းတွင်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်တိကျသောလျှောက်လွှာဖြစ်သည်
ကောင်းသောရုပ်ရှင်ရုံကိုနှစ်သက်သူများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများကိုနှစ်သက်သူများသည်ကံကောင်းစွာဖြင့်နောက်လာမည့်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြတော့မည် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်အချိန်, များအတွက်အန္တိမ app ကို စပိန်ဘာသာဖြင့်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများကိုကြည့်ပါ။
ရုံကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ»နိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင် Popcorn အချိန်ကိုအခမဲ့ download ရယူပါ မည်သည့် operating system အတွက်မဆို Android terminal များ၌၎င်းတို့အားတက်ဘလက်များ၊ တက်ဘလက်များ၊ စမတ်ဖုန်းများဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးဖြစ်စေ၊ Android ဆိပ်ကမ်းများတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတပ်ဆင်နည်းကိုလည်းရှင်းပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စပိန်စာတန်းထိုးနှင့်အတူမူရင်းဗားရှင်းရှိရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများကိုကြည့်ပါ။ ဒါဟာသံသယမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ် Wiseplay ၏ကျော်ကြားစာရင်းသို့မဟုတ်လိုင်းများမှကောင်းတစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာ.
2 Popcorn အချိန်နဲ့ဘာကြည့်လို့ရမလဲ။
3 Popcorn အချိန်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
4 Popcorn Time ကိုဘယ်မှာ download လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်အချိန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံပလက်ဖောင်းပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်အားလုံးအတွက်ခိုင်လုံသောလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ streaming များဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်။ မူရင်းဗားရှင်းအတွက်အခမဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး နှင့်စပိန်အတွက်စာတန်းထိုးနှင့်အတူ။
၎င်းသည် multiplatform application တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ၎င်းကိုဆိုလိုသည် အောက်ပါ operating systems များအတွက်လုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်သည်:
Mac OSX 10.7 နှင့်အထက်
Windows7နဲ့အထက်
32-bit နှင့် 64-bit Linux
Android 4.0.3 နှင့်အထက်
Android TV 5.0 နှင့်အထက်
ပေါက်ပေါက်အချိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျယ်ပြန့်သောကတ်တလောက်ပေးသည် အကောင်းဆုံးနှင့်လက်ရှိရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများ၏ဗီဒီယိုလွှင့်ထုတ်ခြင်း စပိန်စာတန်းထိုးများ၊ အကောင်းဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးအခန်းကြီးများနှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံး anime စီးရီးများပြည့်စုံသည့်ရာသီများနှင့်အတူမူရင်းဗားရှင်းရှိရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်။
Popcorn အချိန်တွင်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောနေရာတွင်ရှိသည် မူရင်းဗားရှင်းအတွက်အခမဲ့ရုပ်ရှင်၏ catalogအဖြစ်လက်ရှိအဖြစ်ခေါင်းစဉ်များ:
ယင်းကြောင့် စာတန်းထိုးနှင့်အတူမူရင်းဗားရှင်းအတွက်စီးရီး၏ catalog ဒါဟာကျန်ရစ်သည်မဟုတ်, ငါတို့ကဲ့သို့သောကမ္ဘာကြီးရုပ်မြင်သံကြား၏အလွန်ကြီးစွာသောဂန္ထဝင်ရှာတွေ့နိုင်သည်မဟုတ် ပျောက်ဆုံး (ရှုံးသည်), သို့မဟုတ်အဖြစ်လက်ရှိအဖြစ် hits ၏နောက်ဆုံးရာသီ:
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်အချိန် ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်ဖော်ပြပါရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများကို၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောကတ်တလောက်တွင်ပါဝင်သောမည်သည့်ဆာဗာအမျိုးအစားမဆိုပါဝင်သောသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့် application အမျိုးအစားမဆို။ ဒီ application ကလုပ်တာကသေးငယ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး Torrent ဖိုင်မျှဝေခြင်းအစီအစဉ် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ uTorrent ဒါမှမဟုတ် BitTorrent၊ ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်နဲ့ Popcorn Time မှာရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ကမ္ဘာနှင့်ဆက်နွယ်နေသော Torrents များကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။ Direct Video Streaming လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်မည်သည့်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်.
အဆိုပါအကြား ပြောင်းဖူးပေါက်အချိန်သတ်မှတ်ချက်များ, လက်ဝဲမှညာသို့ scroll သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာ scrolling အားဖြင့်ငါတို့သုံးနိုင်သည်ကိုလျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်၏အတွင်းပိုင်း settings ကို အထက်ဘယ်ဘက်ထောင့်တွင်ပေါ်လာသောသုံးအလျားလိုက်အစင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏မျက်နှာပြင်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်စာရင်းသွင်းမည့်သူများကဲ့သို့စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ရာများ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်
စပိန်ဘာသာစကားဖြစ်သော Popcorn Time user interface ၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။
အဖွင့်အပိတ်၊ အပြည့်အဝအပြည့်၊ မသန်စွမ်းသို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ရန်ပြန်ဖွင့်စနစ်။
စာတန်းထိုးများအတွက် font color ကိုသတ်မှတ်ပါ။
Popcorn Time ၏တရားဝင်စာမျက်နှာသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်း
တရားဝင် Popcorn Time ဖိုရမ်သို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်း
Application menu ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါပေါ်လာသည့်အထက်ပါ sidebar တွင်၊ (အပေါ်ဆုံးရှိခလုတ်ကိုအလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းသုံးခုဖြင့်ဖော်ပြထားသည်)စီးရီး၊ Anime နှင့် Movies catalog အပြင်တိုက်ရိုက်အပိုင်းလည်းပါဝင်သည် အကြိုက်ဆုံး, အခြားအမျိုးအစားများကိုအမျိုးအစားများအားဖြင့်အမိန့်ထုတ်ထားသော catalog ကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ခေါ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု option ကို VPN ကို ငါတို့ကိုဘာကူညီပေးမလဲ အချို့သောတိုင်းပြည်များတွင်လျှောက်လွှာများခံစားနေရသည့်ဒေသဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ ငါတို့ မှလွဲ၍ အခြားနိုင်ငံရှိဆာဗာတစ်ခုသို့ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်၎င်းလျှောက်လွှာသည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သောကြောင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များမှမခံစားရပါ။
Popcorn Time ကိုဘယ်မှာ download လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
Popcorn အချိန်ကို Android အတွက်အခမဲ့ရနိုင်သည်APK ပုံစံဖြင့်စီမံကိန်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာမှတရား ၀ င်စာမျက်နှာဖြင့်ကြည့်ပါ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ.
ဖိုင်ကို APK format ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့် Android လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အလိုလျောက်တပ်ဆင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်အောင်မြင်စွာ download လုပ်သည့်အကြောင်းကြားစာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ လျှောက်လွှာကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပါ။ Popcorn Time ၏ APK ကိုသင်တပ်ဆင်လိုသည့် Android terminal ၏ချိန်ညှိချက်များမှသင်မဖွင့်မီ၊ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးအပြင်တွင်အပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုမည့်သက်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှု၊ APK format or or မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ.
ရွေးချယ်မှု မသိသောဇစ်မြစ်ကိုဖွင့်ပါ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ Android Terminal ၏ settings menu တွင် Security section ၌ရှိသည်
ပြီးတာနဲ့ option ကိုအတွင်းပိုင်း လုံခွုံရေး, ငါတို့သာအမည်မဖော်လိုသောဇာစ်မြစ်၏ Apps ကို၏ option ကိုမှတ်သားရန်ရှိသည်သို့မဟုတ် မသိသောမူလအစ ပေါ်လာမည့် pop-up ၀ င်းဒိုးတွင် OK ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မင်းဟာအာဏာအနေအထားမှာရှိနေလိမ့်မယ် Market ကမဟုတ်သော applications များ install လုပ်ပါ သို့မဟုတ်ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုး၊ APKs ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သည့်နေရာ၌သင်အလွန်သတိထားသင့်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုဒ်များမှကြည့်ရှုရန်အမြဲတမ်းသတိထားသင့်သော်လည်း Androidsis ပါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အတူမျှဝေသည့် apk အားလုံးရှိပါကမည်သည့်ထောက်ခံချက်ကိုမဆိုမလုပ်ဆောင်မှီ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် Android terminal များတွင်သူတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအမြဲစစ်ဆေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » APK » [APK] Popcorn Time သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်စာတန်းထိုး၊ မူရင်းဗားရှင်းတွင်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်တိကျသောလျှောက်လွှာဖြစ်သည်
Donox Btz Gvr ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် kodi ကိုကိန်းဂဏန်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်
Donox Btz Gvr သို့ပြန်သွားပါ
ငါ၏အ chromecast ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ !!!
Guillermo Iglesias ဟုသူကပြောသည်
အချို့သောဗွီဒီယိုအမျိုးအစားများကို TV တွင်မပြနိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုထွက်ပေါ်လာရသနည်း။
Guillermo iglesias သို့ပြန်သွားပါ
Everalbum သည် Android သို့လာပြီးသင်၏ဓာတ်ပုံအားလုံးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိနေရာပေးနိုင်သည်